Nri | Ọkọwa Okwu Ahụike
Nri Oriri Mmiri-ara ehi na Magbata na Nsogbu Nsogbu Di Oria Di Nsogbu Dibara Ọbara
Bright Amponsah Nwere ike 23, 2020
Nri Oriri -Aka-Miri - Oria iri nri abuba abuo nke mmiri ara ehi ka ejikọtara ha na nsogbu di ala ibute oria shuga na obara mgbali elu, yana ihe ndi n’ebuli oria obi agha agha (metabolic syndrome), achota ihe omumu buru ibu nke mba uwa biputere na intaneti BMJ Open Nnyocha Nnyocha Ọrịa & Nlekọta. Mkpakọrịta ndị a hụrụ anya siri ike maka ngwaahịa mmiri ara ehi zuru ezu
Kedu ụzọ kachasị mma maka ịdị mfe nke ịdị arọ?
Kọfị enemas na-eme karịa inye aka na mgbu na ọbara dị ọcha, ha bụ ndị a na-agabigoro maka ịdị arọ dị mfe na ọgwụgwọ ọrịa kansa. Ha bụ etu Jack Osborne siri tufuo nnukwu ibu, merie na ịkụ ọkpọ ma kụọ ihe riri ya ahụ. Ha bụkwa ihe ụfọdụ ụlọọgwụ cancer zuru oke na-eji.
Ngwa ngwa nri nri ọsọ ọsọ
Gbalịa ajụjụ nri a na-atọ ụtọ.
Ọ ga-eju gị anya ma ị mee ma ọ bụ ịmaghị gbasara ahụike nri.
Relọ Ọgwụ Maka Ahụike Na Ọrịa Maka Ọrịa Crohns
Clifford Nwere ike 22, 2019
Ọrịa Crohn bụ ọrịa ọgbụgba na-ewe iwe. Ihe mgbaàmà bụ isi afọ, afọ ọsịsa (nke nwere ike ịmịnye ọbara, ọ bụ ezie na nke a nwere ike ọ gaghị ahụ ọtọ ọtọ), afọ ntachi, vomiting, ibu ma ọ bụ oke ibu.